Espana: Mivoatra ny Hetsi-Panoherana, Saingy Mbola Mitohy Mafàna Ny Raharaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2011 20:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, polski, عربي, Português, русский, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Ireo fanentanana nanomboka tamin'ny 15 May tao Espana dia nivadika niandàlana ho famoriam-bahoaka tao an-toerana, fivorivoriana ary karazana fandraisan'andraikitra maro samihafa nanerana ny firenena. Tsy mifantoka fotsiny amin'ny toeram-pilasiana ny ankamaroan'ireo mafanà fo. Nanapa-kevitra ny handao ny kianja “Puerta del Sol” tao Madrid ireo mpilasy tamin'ny 12 Jona 2011. Nanjary endrika hita maso amin'ny tsy fahazoan'ny vahoaka aina io, noho ny ataon'ireo solontenan'izy ireo ara-politika. Ireo mponin'ny aterineto dia miantso an'io fikisahana io hoe “Sol se mueve” (Mikisaka ny tany), ary mampiasa ny tenifototra #solsemueve ao amin'ny Twitter.
Tsy midika izany fa hoe maty ny hetsika. Miara-dàlana eny miaraka amin'ny hetsika manokana ny fihaonana sy fivoriana, sahala amin'ny diabe nankany amin'ny filankevitry ny tanàna tamin'ny 11 Jona mba hanoherana ny fametrahana amin'ny toerany ireo mpanao politika voampanga amin'ny resaka kolikoly. Tao Madrid, renivohitra, niafara tamin'ny firotsahana an-tsehatry ny polisy namely ireo mpanao hetsi-panoherana ny fitorevahana iray, izay azo jerena ao anatinà lahatsary iray miparitaka be ao amin'ny aterineto, tahaka ity iray ity izay nozarain'i Juan Luis Sánchez, mpanao gazety ao amin'ny Periodismo Humano [es]:
Ireo fihetsiketsehana dia azo arahana ao amn'ny Twitter amin'ny tenifototra hoe #15menpleno:
dar1o Velon-kira ao madrid sady manandratra ny tànany ry zareo: ireto no fitaovam-piadianay! #15menpleno #acampadasol
bufetalmeida: Ireo solontena ara-politika izay nanary ny tahotr'izy ireo ary nanatevin-daharana ny mpanao fihestiketsehana. Tsy mitondra mpiaro, na fiaram-panjakana. Tsyamin-tahotra, izy ireo no antoky ny ampitso. #15Menpleno
@Acampadabcn: Fidarohana ary olona telo voasambotra tao Palma de Mallorca. Mankany amin'ny paositry ny polisy ao San Ferrán avokoa ny tsirairay ankehitrny!” #15menpleno
Madrid, 11 Jona 2011. Sary sy alalana avy amin'i Cristina Marí, @cristinagayart.
Roa andro talohan'izao, ny 9 Jona, nizotra nankany amin'ny Kaongresy ny vahoaka mba hanohitra ny fanapahana ny tetibola farany teo, izay nahatonga olona maro ho ao anaty fahasahiranana ara-toekarena mafy tokoa ary ao anaty toerana tena faran'izay marefo. Io dia tena noresahana betsaka tokoa tany anaty fampahalalam-baovao Espaniola [es]. Io koa no isan'izay lohahevitra nitondràna fanehoan-kevitra be indrindra tany anaty tambajotra sosialy tamin'izany andro izany, indrindra tamin'ny alalan'ilay tenifototra #15mfrentealcongreso :
phumano: Mamihina ilay “raien'ny revolisiona” notehafana fatratra ireo mpanao fihetsiketsehana #15M, #15Mfrentealcongreso, avy amin'i J Bauluz http://yfrog.com/hsltfraj [amin'ny teny anglisy]
Ny "Raiben'ny Revolisiona Espaniola". Nozarain'i Patricia Simón ho an'ny Periodismo Humano
Ny olona sasany koa dia manohitra ilay fanentanana ary misisika fa hoe tokony hanaisotra ireo mafàna fo tsy ho eny amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe ny polisy :
DarkPlooKoon: Feno polisy be lavitra noho ireo sivily ka dia tsy vitan'izy ireo ve ny manala azy ireo. Fa inona ary ity r'ingahy Rubalcaba? Mahamenatra! #19J #15MFRENTEALCONGRESO [Note: Alfredo Pérez Rubalcaba dia Praiministra lefitra]
Ireny fanentanana ireny dia maneho ny hantsana tsy mitsaha-mitombo misy eo amin'ny vahoaka sy ny governemanta ao Espana, izay efa manomboka hita mivaingana mihitsy taorian'ny nisamborana mpikambana telo avy amin'ireo mafanà fo ao amin'ny fikambanana Anonymous, hacktivist iraisam-pirenena nampangaina ho “nijirika sy nipaingotra vohiklìala ofisialy.” Nirehareha tokoa ny polisy nilaza ilay fisamborana tamin'ny alalan'ny fanambaràna ofisilay iray [es]:
Rana ny atidoha mpitarika ny vondrona Anonymous eto Espaina.
Ny sary izay anehoan'ny polisy ny saron-tava fampiasan'ny mpikambana ao amin'ny Anonymous mba hanaovana ny lazaina fa heloka bevava dia naparitaka be tokoa teo anivon'ny aterineto:
Nozarain'ny Policía (Polisim-pirenena Espaniola) tao amin'ny Twitter
Notaterin'ireo mpampahalala vaovao iraisam-pirenena ilay fisamborana. Nitarika ihany koa an'ireo Espaniola mpampiasa aterineto hanao hanihany mikasika ny tsy fahaizan'ny governemanta ny fiasan'ny atao hoe aterineto izany:
@dbravo: Nihaona taminà namana vitsivitsy aho tany aminà toerana iray izay efa mahazatra anay, saingy tsy hiteny betsaka mba tsy ho voarava eo
Ny Anonymous, toy ireo Espaniola mponin'ny aterineto ihany, dia nanohitra mafy tokoa ny fandaniana tamin'ny 2009 ilay lalàna momba ny fandrosoana ara-toekarena maharitra, izay mamela ny governemanta hanapa-kevitra ny amin'ny hoe vohikala toy inona no ho bahanana na vontoatin'izy ireny manao ahoana no tsy maintsy fafàna, mampiseho felaka mandrivorivo ho an'ny tsy fironana (vakio azafady ny lahatsoratra ao amin'ny Global Voices Advocacy). Porofo iray hafa amin'ny hantsana misy eo anelanelan'ny vahoaka sy ny solontenany ara-politika io, izay niteraka firotsahah an-tsehatra samihafa ho fandraisan'andraikitra mba hananganana fahatsiarovantena ara-politika. Misonga ihany koa ny fihetsiketsehana any amin'ny firenena hafa, manjary lasa ho raharaha manerantany. tahaka izay hita ao anatin'ity lahatsary naparitaky ny France 2 ity: